MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward Pay for5Minutes, get 60 minutes mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Covid-19 ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကာလမှာ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ် စကားတွေ အကြာကြီး ပြောနိုင်ဖို့ အတွက် MPT က နာရီတိုင်းမှာ ငါးမိနစ်စာ အစီအစဉ်ကို ပြန်လည် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။
ယခုလို အရေးပေါ်အချိန်တွင် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ MPT မှ ကြိုးစားလျက်ရှိပါသည်။
All MPT GSM/WCDMA အသုံးပြုသူများအားလုံး အစီအစဉ်ကိုရယူနိုင်ပါသည်။
Base Tariff users များသည် အစီအစဉ်ကိုရယူရန် ဆွေသဟာအစီအစဉ်ကို ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ပါသည်။
လက်ရှိအသုံးပြုခြင်းမရှိသည့် သုံးစွဲသူများ၊နှင့်CDMA အသုံးပြုသူများသည် အစီအစဉ်ကို ရယူနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
အစီအစဉ်ကိုရယူရန် *5055# or *5055*1# ကိုခေါ်ဆို၍ ရယူနိုင်ပါသည်။
အစီအစဉ်ကိုပယ်ဖျက်ရန် *5055*2# ကိုခေါ်ဆိုရယူနိုင်ပါသည်။
ဤအစီအစီအစဉ်ကိုပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း အကန့်အသတ်မရှိ ရယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို နာရီတိုင်းမှာ ၅ မိနစ်စာ အစီအစဉ်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဖုန်းတစ်ခါခေါ်တိုင်း တစ်နာရီအတွင်းဆက်တိုက်ပြောဆိုမှုများအတွက် ပထမ(၅)မိနစ်စာအတွက်သာ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ်(၅၅)မိနစ်အထိ အခမဲ့ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။
ပထမဆုံး ၅မိနစ်စာအတွက် ၁ မိနစ်လျှင် ၂၇ ကျပ်(အခွန်မပါ) ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး ဖုန်းဘေလ် (သို့) ချေးငွေ လက်ကျန်မှ ဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆက်တိုက်ခေါ်ဆိုမှု မိနစ်၆၀ထက်ကျော်လွန်သွားပါက ၁ မိနစ် ၂၇ကျပ်(အခွန်မပါ) ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤအစီအစဉ်သည် MPT ဖုန်းအချင်းချင်းခေါ်ဆိုရန်အတွက်သာဖြစ်ပါသည်။
သက်တမ်း ရက် (၃၀) အတွင်း အခြား ပြည်တွင်းဖုန်းများသို့ခေါ်ဆိုခြင်း၊ စာတိုပေးပို့ခြင်းနှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းတို့အတွက် မူလရယူထားသော SWE/ Shal/ Shwe နှုန်းထားများအတိုင်း (သို့) ပက်ကေ့ချ် (သို့) Bonus များမှ ကျသင့်ဖြတ်တောက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ (MPT အချင်းချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းအတွက်သာ ၁ မိနစ် ၂၇ကျပ်(အခွန်မပါ) ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။)
သက်တမ်း ရက် (၃၀) ကုန်ဆုံးပါက Base Tariff Plan မှ ဆွေသဟာ အစီအစဉ်ကိုပြောင်းလဲရယူထားသော သုံးစွဲသူများသည် မူလ Base Tariff Plan သို့ ပြန်လည်ပြောင်းလဲရယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၁။ နာရီတိုင်းမှာ ၅ မိနစ်စာ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ဆိုတာဘာလဲ?a
MPT မှ သုံးစွဲသူများစိတ်ကြိုက်ပရိုမိုးရှင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ နာရီတိုင်းမှာ ၅ မိနစ်စာ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ် တဖန်ပြန်လည်ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ ဖုန်းတစ်ခါခေါ်တိုင်း တစ်နာရီအတွင်းဆက်တိုက်ပြောဆိုမှုများအတွက် ပထမ(၅)မိနစ်စာအတွက်သာ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ်(၅၅)မိနစ်အထိ အခမဲ့ပြောဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ နာရီတိုင်းမှာ ၅ မိနစ်စာ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ကိုရယူဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲ?
အစီအစဉ်ကိုရယူရန် *5055# or *5055*1# ကိုခေါ်ဆိုရယူနိုင်ပြီး ရက်ပေါင်း (၃၀) အသုံးပြုခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
၃။ သက်တမ်း ရက်ပေါင်း (၃၀)အတွင်း အစီအစဉ်ကို ပယ်ဖျက်၍ရနိုင်ပါသလား?
ဟုတ်ကဲ့။ *5055*2# ကိုခေါ်ဆို၍ အစီအစဉ်ကိုပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။
၄။ အစီအစဉ်ကို ဘယ်သူတွေရယူအသုံးပြုနိုင်မှာလဲ?
MPT GSM/WCDMA အသုံးပြုသူများအားလုံး အစီအစဉ်ကိုရယူနိုင်ပါတယ်။ Base Tariff users များသည် အစီအစဉ်ကိုရယူရန် ဆွေသဟာအစီအစဉ်ကို ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ပါတယ်။ လက်ရှိအသုံးပြုခြင်းမရှိသည့် သုံးစွဲသူများနှင့်CDMA အသုံးပြုသူများသည် အစီအစဉ်ကို ရယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၅။ ဆွေသဟာအစီအစဉ်ကို ဘယ်လိုရယူနိုင်မှာလဲ?
Prepaid စနစ် အသုံးပြုသူများအတွက် *234*2# ၊ Postpaid စနစ် အသုံးပြုသူများအတွက် *235*2# ခေါ်ဆို၍ အခမဲ့စာရင်းသွင်းရယူနိုင်ပါတယ်။
၆။ အစီအစဉ်ကိုရယူပြီး ၂၄ နာရီလုံး အသုံးပြုလို့ရမှာလား?
ဟုတ်ကဲ့။ ၂၄နာရီလုံး ဖုန်းတစ်ခါခေါ်တိုင်း တစ်နာရီအတွင်းဆက်တိုက်ပြောဆိုမှုများအတွက် ပထမ(၅)မိနစ်စာသာ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ်(၅၅)မိနစ်အထိ အခမဲ့ပြောဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။
၇။ ဖုန်းတစ်ဆက်တည်းပြောတဲ့ ပထမဆုံး (၅)မိနစ်ကို ဘယ်ကဖြတ်မှာလဲ။ ၁ မိနစ်ကို ဘယ်လောက်နဲ့ဖြတ်မှာလဲ?
ပထမဆုံး ၅မိနစ်စာအတွက် ၁ မိနစ်လျှင် ၂၇ ကျပ်(အခွန်မပါ) ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး ဖုန်းဘေလ် (သို့) ချေးငွေ လက်ကျန်မှ ဖြတ်တောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၈။ အခြားပြည်တွင်းဖုန်းများကိုခေါ်ဆိုခြင်းအတွက် အကျုံးဝင်ပါသလား?
အကျုံးမဝင်ပါ။ MPT ဖုန်းအချင်းချင်းခေါ်ဆိုရန်အတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၉။ တစ်ဆက်တည်း (၆၃)မိနစ်စာ ဖုန်းပြောထားပါတယ်။ ၂၂၇ ကျပ်ဖြတ်သွားပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ?
ဖုန်းတစ်ခါခေါ်တိုင်း တစ်နာရီအတွင်းဆက်တိုက်ပြောဆိုမှုများအတွက် ပထမ(၅)မိနစ်စာ (၁၄၂ ကျပ်) ကျသင့်ပြီး နောက်ထပ်(၅၅)မိနစ်အတွက်အခမဲ့နှင့် မိနစ်၆၀ထက်ကျော်လွန်သွားသော ၃ မိနစ်စာအတွက် (၈၅ ကျပ်) စုစုပေါင်း ၂၂၇ ကျပ် ကျသင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ သုံးစွဲသူများသည် ဖုန်းတစ်ခါဆက်တိုက်ပြောဆိုမှုများအတွက် (၅၅)မိနစ်အထိ အခမဲ့ပြောဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၀။ အစီအစဉ်ကိုရယူပြီး ၂ မိနစ်ဖုန်းပြောထားပါတယ်။ ဖုန်းချပြီး နောက်ထပ် ၃ မိနစ်ဖုန်းပြောထားပါတယ်။ နောက်ထပ်ပြောမယ့် ၅၅ မိနစ်စာအတွက် အခမဲ့ဖုန်းပြောခွင့်ရမှာလား?
မရရှိနိုင်ပါ။ ဖုန်းတစ်ခါခေါ်တိုင်း တစ်နာရီအတွင်းဆက်တိုက်ပြောဆိုမှုများအတွက်သာ ပထမ(၅)မိနစ်စာအတွက် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ်(၅၅)မိနစ်အထိ အခမဲ့ပြောဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ခေါ်ဆိုထားသည့် တစ်ဆက်တည်းမဟုတ်သည့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ (၂ မိနစ် နှင့် ၃ မိနစ်) အတွက် ၁ မိနစ်လျှင် ၂၇ကျပ်(အခွန်မပါ) ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၁။ အစီအစဉ်ကိုရယူထားတဲ့ ရက်(၃၀)သက်တမ်းအတွင်း အခြားပြည်တွင်းဖုန်းများကိုခေါ်ဆိုခြင်း၊ စာတိုပေးပို့ခြင်းနှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းတို့အတွက် ဘယ်လိုဖြတ်တောက်မှာလဲ?
အစီအစဉ်ကိုရယူထားတဲ့ ရက်(၃၀) သက်တမ်းအတွင်း အခြား ပြည်တွင်းဖုန်းများသို့ခေါ်ဆိုခြင်း၊ စာတိုပေးပို့ခြင်းနှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းတို့အတွက် ပုံမှန်ရယူထားသော SWE/ Shal/ Shwe နှုန်းထားများအတိုင်း၊ ပက်ကေ့ချ် (နှင့်/သို့) Bonus များမှ ကျသင့်ဖြတ်တောက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၂။ အစီအစဉ်ကိုရယူထားတဲ့ ရက်(၃၀)သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါက Base Tariff Plan မှ ဆွေသဟာ အစီအစဉ်ကိုပြောင်းလဲရယူထားသော သုံးစွဲသူများသည် မူလ Base Tariff Plan သို့ ပြန်လည်ပြောင်းလဲရယူနိုင်မှာလား?
မရယူနိုင်ပါ။ အစီအစဉ်ကိုရယူထားတဲ့ ရက်(၃၀)သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါက Base Tariff Plan မှ ဆွေသဟာ အစီအစဉ်ကိုပြောင်းလဲရယူထားသော သုံးစွဲသူများသည် မူလ Base Tariff Plan သို့ ပြန်လည်ပြောင်းလဲရယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။